सौराहाका व्यवसायीलाई हात्ती पाल्नै कठिन ! – Nepaliko Aawaj
सौराहाका व्यवसायीलाई हात्ती पाल्नै कठिन !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २१, २०७६ | १०:३९:११
सौारहा । हात्ती सफारी हुँदा ऊ आफैँ चर्ने गर्दथ्यो । घाँस काटेर पनि खुवाइन्थ्यो । लकडाउनमा सफारीमात्र होइन घाँस काट्न पनि नमिल्ने भएपछि सौराहाका व्यवसायीलाई बाँधेर हात्ती पाल्न गाह्रो हुन थालेको छ । सामुदायिक वनहरुमा अहिले घाँस काट्न जान रोकिएको छ ।
पर्यटकीय गतिविधि बन्द भएसँगै अहिले हात्ती पाल्न कठिन भएको हो । हात्ती पाल्ने व्यवसायीले मानिसको भन्दा हात्तीको बढी चिन्ता हुन थालेको जनाएका छन् । हाल सौराहामा ६० निजी हात्ती छन् ।
क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई पहिले हात्ती सफारीमा जाँदा हरियो घाँस खाने गरेको भए पनि अहिले पराल र धानमा निर्भर हुनुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हात्तीका लागि सञ्चय गरेको खाद्यान्न सकिन लाग्यो कसरी बचाउने चिन्ता हुन थाल्यो ।”
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पालिएका एउटा हात्तीलाई दैनिक न्यूनतम् ३५० किलो घाँस, १० किलो धान र २५ ग्राम वीरेनुन दिने गरिएको छ । निजी हात्तीलाई त्यसकै तलमाथि दिने गरिन्छ । क्षेत्रीय होटल संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन घिमिरे हात्तीको आहाराको सन्तुलन नमिलेमा पछिसम्म समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् ।
एकातर्फ खाद्यान्नको अभाव हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ हात्तीको स्वास्थ्यका लागि पनि हिँडाउनु, डुलाउनु र चराउँनु राम्रो हुने उनको भनाइ छ । निकुञ्जले घाँस काट्न र छेउछाउमा चराउने व्यवस्था मिलाइदिएमा हात्ती जोगाउन सकिने घिमिरेले बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेती निजी हात्तीलाई समस्या परेको बारेमा आफूलाई व्यवसायीहरुले जानकारी नगराएको बताएका छन् । अहिले घाँस नभएपछि निकुञ्जका हात्तीलाई पनि पराल किनेर खुवाएको उनले जानकारी दिए । निकुञ्जमात्रै ६४ वटा हात्ती रहेका छन् । ती हात्तीको रेखदेख गर्न १२३ जना कर्मचारी छन् । पानी परेपछि घाँस पलाउने भन्दै निकुञ्जमै घाँसको अभाव भएको रुपाखेतीको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले निकुञ्जभित्र हात्ती सफारी गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएको भए पनि अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।
निकुञ्जमा पालिएका एउटा हात्तीलाई दैनिक न्यूनतम ३५० किलो घाँस, १० किलो धान र २५ ग्राम बिरेनुन दिने गरिएको छ । निजी हात्तीहरुलाई त्यसकै तलमाथि दिने गरिन्छ । एउटा हात्ती हेर्नका लागि तीन जना कर्मचारी आवश्यक पर्दछ । उनीहरुको तलब भत्ता र पालन पोषण सामान्य भए पनि हात्ती पाल्न भने निकै कठिन भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । समस्याको विषयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग औपचारिकरुपमा अनुरोध गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
क्षेत्रीय होटल संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरे हात्तीको आहाराको सन्तुलन नमिलेमा पछिसम्म समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् । एकातर्फ खाद्यान्नको अभाव हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ हात्तीको स्वास्थ्यका लागि पनि हिँडाउनु, डुलाउनु र चराउँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । निकुञ्जले घाँस काट्न र छेउछाउमा चराउने व्यवस्था मिलाइदिए हात्ती जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
हात्तीलाई हुने खाद्यान्न अभाव समाधानका लागि निकुञ्जले कुनै निश्चित क्षेत्रमा हात्ती चराउन दिनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । एउटा हात्तीको मूल्य रु ८० लाख हाराहारी पर्छ, जसले ६० वर्षसम्म सेवा दिन सक्छ तर त्यसका लागि पालनपोषणको राम्रो प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
चितवन घुम्न आउने पर्यटकलाई घुमाउन नीजि हात्ती मात्र प्रयोग गरिन्छ । सो निकुञ्जलाई कर तिरेर सामुदायिक वनहरुमा हात्ती सफारी गराइँदै आएको छ । सौराहामा रहेका निजी हात्तीहरु कुमरोज सामुदायिक वन, खोरसोर मध्यवर्ती क्षेत्र, चित्रसेन सामुदायिक वन र बाघमारा सामुदायिक वनमा सफारीका लागि लैजाने गरिन्छ ।
विसं। २०७५ असोज २९ गते निकुञ्जको नियमावली संशोधन गरी निजी हात्तीलाई निकुञ्ज प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । बाहिरका हात्तीभित्र जाँदा रोग सार्न सक्ने खतरा देखिएकाले रोकिएको भनाइ निकुञ्जको छ । व्यवसायीहरुले निजी हात्ती निकुञ्ज छिर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हात्ती पाल्न कठिन हुने र पशु अधिकारकर्मीले हात्तीमाथि मान्छे चढाउन नहुने भन्दै विरोध गरेपछि व्यवसायीहरु नयाँ मनस्थितिका साथ अघि बढेका छन् । रासस